Firefox 84 yakatoburitswa uye ndiyo yazvino vhezheni yebrowser inoenderana neAdobe Flash | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla yakazivisa kuwanikwa kweFirefox 84, zvinova yazvino vhezheni yebrowser kuve neAdobe Flash kuenderana uye kutanga neshanduro 85 hakuzovi nezvirongwa zvinowanikwazve kugonesa Flash rutsigiro mushanduro dzemberi.
Firefox 84 inouya nemugove wayo wezvinhu zvitsva, pakati pavo zvinomira pachena kuti bhurawuza ikozvino inoshandisa dzimwe nzira dzechizvino-zvino kugovera yakagovaniswa ndangariro muLinux, pamwe nerutsigiro rwemidziyo mitsva yeMacOS.
1 Chii chitsva muFirefox 84?
Chii chitsva muFirefox 84?
Iyi vhezheni itsva yeFirefox 84 inoratidza rutsigiro rwemuno rweMacOS zvishandiso zvakavakwa neApple Silicon processor izvo "zvinounza zvinoshamisa mashandiro ekuita pamusoro peiyo isiri-yemhando vhezheni yakatumirwa muFirefox 83" uye ndeyekuti maererano neMozilla ratings: Firefox inotangisa kanopfuura ka2,5 nekukurumidza uye webhu kunyorera ikozvino kuve nekwaniso yekupindura kaviri (zvichibva paSpeedoMeter 2.0 bvunzo) .
Kana mushandisi ari kushandisa Mac yakarongedzwa neApple chip, vanofanirwa kuvhara zvachose Firefox voitangazve mushure mekuvandudza vhezheni 84 kana zvichikwira, kuitira kuti Firefox ikwanise kumhanyisa pane zvivakwa zvitsva zvinopa mashandiro akanaka uye kureba kweBattery.
Mushure mekusimudzira kuFirefox vhezheni 84 kana yakakwira kubva pane yapfuura vhezheni:
Mushandisi anofanira kuenda kumenu yeFirefox kumusoro kwescreen yako.
Sarudza Buda Firefox
Kana Firefox yakavhurwa, ichave iri pane iyo nyowani yekuvaka.
Uyewo ye MacOS WebRender yakaitwa mukati Yakakurazvakanaka Mozilla yatanga kuburitsa iyo WebRender GPU-yakavakirwa 2D inopa injini muFirefox 67 yeboka rakashoma revashandisi. Mushure mekuwedzera rutsigiro rweWebRender kune zvimwe Windows 10 malaptop nekuburitswa kweFirefox 77, WebRender yaive zvakare kuwanikwa paWindows 10 zvishandiso zvine Intel GPU inomhanya Firefox 78.
Iine Firefox 79, WebRender yakaburitswawo iripo paWindows 10 zvishandiso zvine AMD GPU. Iine Firefox 84, WebRender yakaiswa paMacOS Big Sur, zvishandiso zveWindows zvine Intel Gen 6 GPUs, uye malaptop eIntel ane Windows 7 ne8.
Uyewo, Mozilla ichaburitsa yakakurumidza dhizaini chiteshi yeva-wenguva-nguva vashandisi kubvira Linux yeGnome uye X11.
Uye iri kutaurawo nezveLinux, mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 84 ikozvino inoshandisa matekiniki azvino uno ekugovera memory yakagovaniswa muLinux, kuvandudza mashandiro, uye kuwedzera kuenderana kweDocker.
Kana ari gadziriso dzakagadzirwa muFirefox 84 tinogona kuwana zvinotevera:
(CVE-2020-16042) Kushanda paBigInt kwaigona kuve kwakaburitsa pachena isina kuvhurwa ndangariro - apo BigInt yakakwenenzverwa kurudyi, zvaigona kuverenga memory isina kuvhurwa. Iyi bhagi yakaratidzirwa yakatsoropodza.
(CVE-2020-26971) WebGL Stack Buffer Kufashukira - Mumwe mushandisi akapihwa blit tsika haana kumanikidzwa nemazvo, zvichikonzera stack buffer kufashukira mune mamwe mavhidhiyo madhiraivha. Iko kukanganisa kwakaratidzirwa sekufa.
(CVE-2020-26975) Android malware maapplication aigona kunge akanyengedza Firefox yeAroid mukutumira inorwisa-yakatsanangurwa misoro inopokana: Kana pakaipa app yakaiswa pachigadzirwa chemushandisi yakashanda seChinangwa cheFirefox yeAroid, vanogona kunge vaine misoro yakatarwa, izvo zvakakonzera kurwiswa kwakadai sekushungurudzwa kwechiremera chemamiriro ekunze kana kumisikidzwa kwechikamu. Iyi nyaya yakagadziriswa nekutendera chete mamwe akachengetedzeka musoro Ehezve, dambudziko iri rinongobata Android uye hapana imwe sisitimu inoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 84 yakatoburitswa uye ndiyo yazvino vhezheni yebrowser inoenderana neAdobe Flash